Dowladda Mareykanka oo Musaafurineysa Somaalidii ugu badneyd ee dalkeeda ku sugan – Balcad.com Teyteyleey
Dowladda Mareykanka oo Musaafurineysa Somaalidii ugu badneyd ee dalkeeda ku sugan
By Hassan	 Last updated May 29, 2017
Dowlada Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in dalkeeda ay kasoo musaafurineyso shan kun qof oo Soomaali ah ,kuwaas oo qaarkood dalka ku jooga sharci daro halka kuwa kalana ay galeen dambiyo kala duwan.
Afhayeenka waaxda fulinta arrimaha socdaalka iyo kastamka Brendan Raedy, ayaa sheegay in laga soo bilaabo 1-dii bishan April, 2017 ilaa 4,801 qof oo Soomaali ah ay heleen amarkii u danbeeyay ee dalka looga soo saari lahaa.
Waxa uu tilmaamay Afhayeenka in horey dalka Mareykanka looga soo musaafuriyay dad gaaraya 237 oo si qasab ah Soomaaliya looga dejiyay, dadkan ayaana u badnaa kuwa ku xirnaa xabsiyada dalkaasi.
Safiirka Soomaaliya ee Maryakanka Axmed Ciise Awad ayaa horey u sheegay in safaaradda ay oggaatay in hay’addaha socdaalka Maraykanku ay masaafuriyaan ilaa 4 kun oo Soomaali ah oo iminka ku nool Maraykanka.
Dowlada Mareykanka ayaa sheegtay in dadkan Somalida ah ay musaafurineyso intooda badan ay galeen dambiyo , waxa ayna dowladu Don’t skip this ad, because it will provide you with the best Brand cialis purchase solution! Buy it now for 5.23 USD today! sheegtay in ay diirada saareyso ayna musaafurineyso kuwa ay u arkaan in ay halis ku yihiin amaankooda.
KHEYRE: “Waxaan xooga saareynaa abuurista fursado waxsoosaarka kheyraadka Badda”
Dekeda Muqdisho oo Qalab lagu baaro waxyaabaha qarxa lagusoo kordhiyey